Aagan Fm 'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई' डा .गोविन्द केसीले दिए, स्वास्थ्यलाभको कामना ।
कार्तिक १५ । शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई डा. गोविन्द केसीले भेटेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. केसीले बुधबार साँझ भेटेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर डा. केसीले स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका थिए।
डा. केसीनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले चिकित्सकहरूको सहयोगले आफू जीवित रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले केसीलाई भनेको कुरा उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सकहरूको मिहिनेतले बाँचिरहेको छु भन्नुभयो। उहाँले डा. केसीलाई ‘संयोगवश तपाईं र मेरो चिकित्सक पनि डा. दिव्या नै पर्नुभयो’ भन्नुभएको थियो।‘
दिव्या सिंह प्रधानमन्त्रीका नीजि चिकित्सक हुन् भने उनले डा. केसीको पनि उपचार गर्ने गरेका छन्। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अबको संसद अधिवेशनबाट पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर, डा. केसीले भने उक्त विषयमा आफू कुरा गर्न नआएको जवाफ दिएका थिए। उनले पुनः प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै फर्किएका थिए।
पटकपटकको आमरण अनशनपछि सरकारले डा. केसीले उठाएका माग पूरा गर्ने सहमती गरेको थियो। तर सहमती पालना नभएको भन्दै डा. केसीले अर्को अनशनको चेतावनी दिँदै आएका छन्।